BAC iyo CAAG Waa Dhaqanka Cusub ee Dalka Somaliya ku soo kordhay ,Dhibaato Ba’ana Ku Hayo Dalka , Dadk iyo Duunyada(Akhri oo Daawo) | waamonews
Sunday, February 14th, 2016 | Posted by editor
Qoraalkan iyo muuqaaladan waxaa ku soo bandhigeynaa waxyaabahii badalay dhaqanka iyo hidaheenii iyo Dhibaatada ay ku hayaan Dadka ,Dalka iyo Duunyadaba iyo waliba sida ay saameeyn ugu yeesheen bay’ada dalkeena.
Hadaba waamonews waxuu idiin soo Gudbini isbedalka Khatarta ah ee ku dhacay hab dhaqankii Bulshadeena Soomaaliyeed. Waxyaabahii hore ee aan dhaqanka u laheyn ee Dabiiciga ahaa Waxaa badalay BAC iyo CAAG, khatar ku ah nolosha Noolaha Dunida ku dhaqan Dad iyo duunyaba.
Aqal Soomaali Bac ama Plastic ka sameysan.
Marka laga soo tago dhibaatada uu ugeysanayo dadka ku nool ee jiida neefta sunta ah ee ay soo dayneyso bacda maalinki oo dhan Qoraxda ku dhaceyso, waxaa kaloo ay halis ku tahay bay’ada oo nabaad guurka ayay horseed u tahay. Waxaana laga qaadaa Xanuuno halis ah oo ku dhaca Maqaarka qofka iyo waliba Sambabada, sida xanuunka Kansarka. Marka dadka habeenki ku hoyda Aqalka Bacda ka sameysan ee Maalinki oo dhan Cadceeda ku dhaceysay, Caafimaadkiisa halis ayuu ku jiraa. Bacda waa Calaamada Nabaad Guurka , waxayna astaan u tahay nolol xumo.
Bac Heeryadii Bedashay Khatar Cusub oo Caafimaad iyo mid Bay’ad intuba.
Caagag (Plastic) ah ayaa Caanaha lagu shubaa oo bedalay Dhiishi Cugneyd ee horey u Isticmaali jirnay iyo waliba Kalooradii Caanaha lagu Keydin jiray ee Magaalada laga isticmaali jiray. Haatan reer Miyigi Caanaha Caag ayay ku keenaan oo dhiishii waay ka guureen, Sidoo kale reer Magaalkii Caag kale ayay ku sii shubtaan oo ay ku iibiyaan iyaguna Kalooradii waay ka guureen. CAAGAGA Caanaha lagu shubayo Xanuuno badan ayaa ka dhashaa, waxaana sii dheer in Caagagaasi ay yihiin kuwa nadaafadoodu aad liidato oo Maalin kasta la isticmaalo, Waana Khatar Caafimaadaro aad u weyn oo soo food saartay Umada Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo ay halis ku yahiin Bay’ada oo ay wasaqeynayaan, nadaafad daro baaxadweyn ayaa ka dhalata, meel kasta waxaa daadsan Caagaga iyo Bacda Waxayna Khatar ku yahiin Caafimaadka dalka ,dadka iyo Duunyada oo xoolaha waay Cunaan,kadibna waay ku dhintaan. Wadanka waxaa soo foodsaari (Environmental Problems) Dhibaato ku timaada deegaanka oo horseeda Cimilada oo wasaqowda iyo Nabaad Guur halis ah oo Keena Roob la’aan, Abaaro ba’an iyo Xanuuno Joogta ah oo saameeya dad iyo duunyaba, .
Caagaga Caanaha Lagu Keeno laguna iibiyo Khatar Cusub oo halis ah iyo Gudaafad soo korodhay.
Reer Miyigi Biyaha Dhiisha ku soo Dhaansan jiray , Waxay Ku Bedasheen CAAG, Awrta iyo Dameeraha Biyaha lagu Dhaaminayo waxaa Dhoon Horaad u ah oo Dhiisii lagu Bedala CAAG 20 ama 30 qaad ah. Dhiishi Udgooneyd ee Caafimaadka qabtay Waa la Tuuray Xanuun fadhiyo ayaa Biya lagu dhaansanayaa. Dhaqan Rogmay , Dhiishi CAAG Baa bedalay.
Dhaan Caag Khatar Caafimaad.
Dambiishi iyo Qariiradki lagu soo adeegan jiray waxaa Bedalay BAC. Reer Migiya Qariirad ayay Isticmaali Jireen oo Mara ka sameysan ,Halka Magaalada Danbiisha ama Selada laga Isticmaali Jiray, Laakiin hada Nasiib daro Belad iyo Baadiya waxaa la wareegay BAC-da oo Halis xun ku ah Caafimaadka dadka iyo Duunyadaba. Bacda Waxay kow ka tahay Nabaad Guurka,Waa Sun Khatar ah oo Neefka Xoolaha ah ee Cunna uu ku dhimanayo, Waxaa laga qaadaa Xanuunka Kansarka, Waa Nadaafad daro aabaheeda oo waxay wasaqeysaa Bay’ada wadanka, Way adagtahay in dalka laga nadiifiyo( Recycling) lagu sameeyo oo waxay qabsani Geeaha iyo meel kasta, waxaa si fudud u qaadi dabeesha oo meel kasta Geeyni. Lama qiyaasi karo Khatarta Bay’ada ay u leedahay BACDA(Plastic Bag).
Intaasi waxaa Sii dheer dalka kama jirto dowlad bay’ada nadiifini oo la dagaalami Bacda iyo Khatarteeda, Caalamka Hormaray ayaa qaatiyaan ka taagan Sidii ay uga hor tagi lahaayeen waxyaabaha Balaastiga ka sameysan ,iyagoo waliba hormaray oo dib u warshadeyn ku sameeya. Hadana bacda ayaa ugu sii daran oo dalka ayay ku faafi, Xitaa Bada hadii lagu rido waxay dhibaato baaxad weyn u Keeni Noolaha Bada ku nool oo kaluunka ayaa dhamaani.
Marka Bacda iyo Caaga waa Khatar weyn oo u baahan in dadka Soomaaliyeed laga wacyi Geliyo, Si ay u yareeyaan Isticmaalkeeda. Soomaaliya maanta heer waxay mareysaa in hadaad Cabitaan iibsaneyso Bac laguugu shubayo, waa wax aad loola yaabo . Wadankii dhamaa waxaa la wareegay BAC iyo CAAG.
BAC Beledki la wareegtay, Halis Caafimaad dad iyo duunyaba, mid bay’ad iyo waliba Gudaafad xad dhaaf ah.
Shamaca Soomaalida sida Safiitada u isticmaasho ee guryaha gudaha looga dhejiyo xitaa waa caafimaad daro. maxaa yeelay waa Caag, inta badana Afrika unbaa laga isticmaala. Bulshada Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa inay fiira gaara u yeeshaan Khatarta Caafimaad iyo mida nabaad guurka ay nagu hayaan BACDA iyo CAAGA ee Dalkeena hooya Sida xad dhaafka ah looga Isticmaalo. Reer Guuraaga hadaay doonayaan Roob iyo Barwaaqo waa inay Joojiyaan Isticmaalka Caaga iyo Bacda, oo ay isticmaalaan dhiishi iyo waliba qariiradkaay Beledka kaga Adeegan Jireen, Sidoo kale Magaalada dadka ku nool waa inay ku soo laabtaan Dabiilahoodii, iyo Kalooradahii (Jaag) ay isticmaali jireen, si Nadaafada deegaanka iyo tan dadka loo ilaaliyo isla markaasina looga hortago Khatarta Bacaha iyo Caagaga ay keenayaan.
Dhaqankeeni hore ee Soomaaliya markaad dib u eegto waxuu ahaa mid aad u wanaagsan isla markaasina wax tar u lahaa dalka dadka iyo duunyada intuba. Xitaa dhanka dhaqaalaha dalka qeyb ayay qaadan lahaayeen hadii loo laabto dhaqankii hore, waxaa kuu baaqani dhaqaalaha maalin kasta kaaga baxaya bacda iyo caaga xanuunka laga qaadayo, Sidoo kale waxaa shaqo heli lahaa farsama yaqaanada Soomaaliya oo shaqo abuur ay u noqon laheyd, ka dhiisa qora, ka danbiisha iyo derinta sameeya. Waana wax wanaagsan oo dabiici ah isla markaasina ku haaynaya mudda badan, waxaa laga yaaba inaad sanad ilaa dhowr sano aad ku adeegato hal danbiil. halka bacda aad maalin kasta iibsaneyso.
4 Responses for “BAC iyo CAAG Waa Dhaqanka Cusub ee Dalka Somaliya ku soo kordhay ,Dhibaato Ba’ana Ku Hayo Dalka , Dadk iyo Duunyada(Akhri oo Daawo)”
Xasan nuur sheikh says:
Bahda waamo waan idin salaamay.
Qoraal ka wanaagsan waligeey maanan arag,run ahaanti qoraalada noocan wa kuwa bulshada waxtar uleh ,dalkan wax kharibo mooye wax waxtaro oo wanaaga faro lama arag. Aniga Dr xoolaha ayan ahay ,8 bilood kahor ayaan ka qalin jebiye.
Meela kala duwan oo dalka kamida ayan socdaal kusoo maray.
Waxyaabaha anla murugooday waxaa ugu horeeye dhibaatada bacda ay ku heeso deegaanka.
Qoraalkan markan arkay waan ku farxay , waxaan ogaaday iney jiraan dad ka damqanaya waxaan ka murugooday iney jiraan.
Ajar ilaah ha idinka siiyo waad mahadsantahiin’ basaiya qoraalada wacyi gelinta dadka wax tarka uleh,waxaan rajeeynaya warbaahinta afka somaliga ku hadasho dhamaantood iney ka qeyb qaataan arintan.
Xasan Nuur Sheikh
Arintan way fududahay in la xadido waa in la ganaaxaa ganacsatada wadanka soo galisaa waayo bcyahan wadanka laguma warshadeeyo oo waa lasoo dhoofiyaa markaa waa in halka ay dalka ka soo galyaan laga xadido lana ganaaxaa qofka la arko isaga oo ku adeeganayo bac dadku markay arkaan xanuunka dhaqaale ee ganaaxa way daynayaan lakiin hadal wax kuma daayaan.
Caanha caaga lagu keeno waa in reer miiga lagu amro amro in uu dhiil ku keeno caanaha ama uu ku keeno kaloorad macdan ah. suuqa caanaha waa in lahelaa meel u gaar ah luguna amraa in ayku iibiyaan caanaha dhiil ama kaloorad cidii lagu arkaa in aysan amarka u hogaan samayna ganaaxa laga qaadaa marka ugu hore hadii mar labuud lagu helana maxkamad lasoo taagaa luugu xukumaa qatar galin fayadhor bulshu. Waa in lahelaa la helaa laanta fayadhorka bulshada oo haysata shaybaaryo casri ah islakaana samaysa dabgal iyo xoojinta sharciga baxisana shatiyo ganacsi cida ku haboon sida kawaanka iibinta caanaha qudaarta maqaayadaha iyo meelkasto oo aasaasi u ah xoojinta fayadhorka caafimaadka bulshada.
Saleebaan Xayir says:
Barnaamij fiican weye maasha alaah, Anigu waxaan ayidsanahay qaabka walaalkeen Jibriil Ahmed sheege in looga hortagi karo , Ganaax adag halugu soo rogo xarumaha ganacsiga bacda isticmaala,reer miyiga waqti go’an haloo qabto kadibna haday sharciga u hogaansami waayaan ganax neef xoola halaga qaato iyaga ayaaba dan u joojiniye. suuqyada silamida ganaax 100 doolar halaga qaado qofka caano caag ku iibiya.
Talada ugu fiican weye .